Isikhala samafu esingu-50 GB samahhala nge-MEGA | Izindaba zamagajethi
Isevisi yokubamba i-MEGA, kungani uyisebenzisa phakathi kokunye?
Ngaphandle kokuzama ukwenza umfundi acabange ukuthi sithuthukisa futhi sikhangisa ngale nsizakalo yokubamba i-MEGA, esizokwenza empeleni ukugqamisa izinzuzo ezikunikezayo, izinzuzo ezimbalwa kanye nobubi okufanele sazi ngakho konkeUma kuziwa ekusingatheni imininingwane ebalulekile kithi ngaphakathi kwamaseva akho efwini.
Singacishe siqinisekise ukuthi kunezinzuzo eziningi kunokubi ngokwalokho le nsizakalo isinikeza khona Indawo yokuhlala ye-MEGAYize kukufanele ngaso sonke isikhathi ukusho ngayinye yalezi zici ukuze kube ngumsebenzisi wokugcina onquma ukuthi bayayidinga noma cha.
1 Izinzuzo zokusebenzisa insizakalo yokubamba ye-MEGA
2 Okubi kokusebenzisa isevisi yokubamba i-MEGA
Izinzuzo zokusebenzisa insizakalo yokubamba ye-MEGA
Sizoqala ngokuzama ukuklelisa ezinye zezinzuzo eziningi esingaba ngabazuzi bokusebenzisa insiza ye- Indawo yokuhlala ye-MEGA, okuthile esizokuchaza ngezinto ezimbalwa ezingezansi:
I-50 GB ngokuphelele. Yize kuliqiniso ukuthi iGoogle Drayivu isinikeza i-15 GB ngokuphelele, ayanele inani elikhulu lamafayela noma izinhlelo zokusebenza esifuna ukusingatha efwini. Ngalesi sizathu, u-50 GB ungumuntu ohloniphekile ukwazi ukusebenzisa ngesizotha lonke ulwazi esiludingayo thina kanye nabanye abantu uma silwabelana nge-URL esisinikeza isevisi efanayo.
Ukuvumelanisa. Lesi ngesinye sezici ezibaluleke kakhulu okufanele usinakekele, ngoba ifayela le- Indawo yokuhlala ye-MEGA Ingasetshenziswa ngesiphequluli sethu se-Intanethi (kunconywa iGoogle Chrome) kwikhompyutha yomuntu siqu, futhi uhlelo lokusebenza lwe-Android olufanele nalo lungalandwa ku-Google Play ukuze lisetshenziswe kumaThebhulethi noma omakhalekhukhwini.
Isivinini sokulanda. Ngaphandle kwamanye amasevisi akhona kuwebhu (i-RapidShare, i-UpLoad phakathi kwabanye), ukuze ukwazi ukulayisha noma ukulanda amafayela esikhaleni sethu efwini ngensizakalo ye Indawo yokuhlala ye-MEGASizodinga kuphela ukuxhumana okuhle kwe-Intanethi okunenkontileka, futhi alukho uhlobo lomkhawulo wejubane njengoba ezinye izinsizakalo ezifanayo zivame ukunikela.
Dala ifolda noma izinkomba. Ukuze izinhlelo zethu noma amafayela ahleleke kahle, i Indawo yokuhlala ye-MEGA isinikeza ithuba lokwakha amafolda noma izinkomba ngaphakathi kwe-akhawunti yethu. Lo msebenzi ungenziwa ngendlela elula futhi efana kakhulu nalokho esingakwenza, nomhloli wethu wefayela.
Kuzo zonke izici esizibalule ngenhla, mhlawumbe kufanelekile ukugqamisa ukubaluleka kwensizakalo Indawo yokuhlala ye-MEGA uma kukhulunywa ngokwabelana ngamafayela phakathi kwamakhompyutha wethu namadivayisi eselula; ngakho-ke ngokwesibonelo, othile angalayisha noma yiluphi uhlobo lwe- amafayela noma amadokhumenti ku-MEGA usebenzisa ikhompyutha yakho nesiphequluli se-Google Chrome, esikwazi ukuvula kamuva uhlelo lokusebenza ku-Android, ukulanda amafayela afanayo kuselula yakho.
Okubi kokusebenzisa isevisi yokubamba i-MEGA
Njengoba siphakamisile ekuqaleni, izinzuzo zikhulu kunezinkinga lapho kwenziwa ukuhlaziywa okuncane kwalokhu Insiza Indawo yokuhlala ye-MEGA; Noma kungahle kube nokuningi kwalokhu kuphazamiseka, mhlawumbe okubaluleke kakhulu ukwephulwa kwelungelo lobunikazi, ngoba uma umuntu ekwazi ukusingatha uhlobo oluthile lwamafayela noma izinhlelo zokusebenza (futhi, izithombe noma amavidiyo) angakatholakali ngokufanele ngokuthengwa kwawo ilayisense elifanele, kuze kube manje kuye kwaphawulwa ukuthi abaphathi be-MEGA abezanga ukuzohlunga lawo mafayili ngokuwasusa.
Ukushiya eceleni lesi sici sokugcina, namuhla Insiza Indawo yokuhlala ye-MEGA Isivele inesicelo sayo futhi inezici ezingeziwe ezithuthukiswe kangcono, into ebingenzeki esikhathini esedlule, ngoba umsebenzisi we-Android (ukunika nje isibonelo) obekufanele asebenzise iklayenti elikhethekile elizokwazi ukusebenzisa lesi sikhala yesitoreji efwini, isimo manje esingezinye zezinzuzo ezinkulu kakhulu zokuba ne-50 GB ngokuphelele.
Imininingwane engaphezulu - Umphathi we-Mega, isicelo se-MEGA se-Android
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Isevisi yokubamba i-MEGA, kungani uyisebenzisa phakathi kokunye?
Ukuhlaziywa kweRyse: iNdodana yaseRoma
Ufuna indlela engcono kakhulu yokukhipha Izinhlelo Zokusebenza ku-Android